တစ်ခါသုံးမိုး Poncho တစ်ခါသုံးမိုး Poncho မှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊
တစ်ခါသုံးမိုး Poncho Výrobce, dodavatel, vývozce s Factory v Taiwan - တစ်ခါသုံးမိုး Poncho, တစ်ခါသုံးမိုး Poncho výrobce, တစ်ခါသုံးမိုး Poncho dodavatel, တစ်ခါသုံးမိုး Poncho vývozci, တစ်ခါသုံးမိုး Poncho vývozce, Taiwan တစ်ခါသုံးမိုး Poncho, တစ်ခါသုံးမိုး Poncho továrna, တစ်ခါသုံးမိုး Poncho výrobci, တစ်ခါသုံးမိုး Poncho Dodavatelé, တစ်ခါသုံးမိုး Poncho výrobce, တစ်ခါသုံးမိုး Poncho OEM, တစ်ခါသုံးမိုး Poncho továrny, တစ်ခါသုံးမိုး Poncho výrobci
တစ်ခါသုံးမိုး Poncho výrobce, dodavatel, vývozce, továrna Taiwan
ဤသည်မိုဃ်းကိုရွာစေ poncho အကြမ်းခံများနှင့်ထူ PE ရေစိုခံပစ္စည်းနှင့်အတူဖန်ဆင်းထားသည်.ဒါဟာခြောက်သွေ့အဆင်ပြေကလေးများစောင့်ရှောက်ခြင်းအားဖြင့်ပိုကောင်းတဲ့ဝတ်ထားအတွေ့အကြုံကိုကမ်းလှမ်း,ထိုသို့ကလေးများပူသို့မဟုတ်စေးကပ်ခံစားရစေမည်မဟုတ်
သားသမီးတို့အဘို့ဘေးကင်းအသုံးပြုရန် drawstring မပါဘဲပါးပျဉ်းဖြင့်လုပ်သော.
elastic cuffs နှင့်အတူအင်္ကျီလက်,နှင့်အခန်းတစ်ခန်း၏ပဒေသာကလေးတွေပတ်ပတ်လည်ရွှေ့နှင့်ဆိုင်ကယ်စီးနင်းတူသောကွဲပြားခြားနားသောပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများလုပ်ဆောင်သွားရန်များအတွက်,စခန်းနှင့်စသည်တို့ကို.
ဤသည်မိုဃ်းကိုရွာစေ poncho သားတို့သည်မိမိတို့ကျောပိုးအိတ်သယ်ဆောင်ရန်ခွင့်ပြုထားတဲ့နေရာမလုံလောက်ရှိပါတယ်
အမြန်ခြောက်သွေ့အတွက်မိုးရွာ poncho features တွေ,ပြန်သုံးနိုင်သောနှင့်အဆင်ပြေ
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.rain-clothing.com/my/disposable-rain-poncho.html
အကောင်းဆုံး တစ်ခါသုံးမိုး Poncho ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် တစ်ခါသုံးမိုး Poncho မှထုတ်လုပ်သော၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံ